ရာသီသိမ်းပွဲစဉ်အတွက်နောက်တန်းနေရာအခက်အခဲရှိနေတဲ့ဒေါ့မွန်အသင်း - FOX Sports Asia
ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ပီတာစတိုဂါက ယခုရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အသင်းရဲ့ centre-back နေရာ ကစားသမားတွေကို သေချာစဉ်းစားရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ ယခုရာသီဘွန်ဒက်စ်လီဂါ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် လာမယ့် စနေနေ့မှာ ဟော်ဖင်ဟိန်း အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတော့ အဝါကဒ် (၅) ကဒ် ပြသခံခဲ့ရတဲ့ ဆိုကရာတစ် ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို တံကောက်ကြောဒဏ်ရာရရှိနေတဲ့ အိုမာတိုပရက် လည်း ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အိုမာတိုပရက် ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ – “ ကျွန်တော်တို့ မသေချာသေးပါဘူး။ သူပါဝင်နိုင်ဖို့က ခက်နေဦးမှာပါ။ ” လို့ နည်းပြ ပီတာစတိုဂါက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ခံစစ် ဘယ်ဘက်ခြမ်းနေရာမှာ မန်နျူရယ်အာကန်ဂျီ ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပေမယ့် လည်း မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ ကြွက်သားဒဏ်ရာကနေပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်တဲ့ နောက်ခံလူ အေဇယ် ဇာဂါဒို ပြန်လည်ပါဝင်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
🗯️ "Hoffenheim ist eine richtig gute Mannschaft: Dreierkette hinten, läuferisch starke Außen, torgefährliche Spieler vorne. Es ist kein Zufall, dass sie um die @ChampionsLeague-Quali mitspielen." #Stöger #TSGBVB pic.twitter.com/mglkPzTPUf
ဇာဂါဒိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ – “ သူကလည်း ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါပဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အဖြေရှာဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ လုံလောက်တဲ့ လူရွေးချယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ လက်ရှိချိန်မှာ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် (၃)နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် စနေနေ့မှာ စတုတ္ထနေရာမှ ဟော်ဖင်ဟိန်း အသင်းနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ် ဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနေရာအတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။
Home FOX Sports မြန်မာ ဘောလုံး ဘွန်​ဒစ်​လီဂါ ရာသီသိမ်းပွဲစဉ်အတွက်နောက်တန်းနေရာအခက်အခဲရှိနေတဲ့ဒေါ့မွန်အသင်း